Hawaii COVID-19 Zvirwere: Imwe Rekodhi Yakakwira Mushure Meimwe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hawaii COVID-19 Zvirwere: Imwe Rekodhi Yakakwira Mushure Meimwe
Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • HITA • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Hawaii COVID-19 Hutachiona Kuwedzera
Hawaii Tourism iri kuwedzera, uye ndizvo zvakaitawo COVID-19 pakati pevasina kubayiwa zvisina kumboitika kare. Iine 243 nyowani coronavirus hutachiona, iyo Aloha Nyika iri mudambudziko guru.
Zviitiko zvitsva zve COVID-19 muHawaii zviri kuwedzera uye vanga vachikwira zuva rega rega kweinopfuura vhiki.
Kufungidzira muhuwandu hwevanhu ikozvino vabaiwa muhurumende, Hawaii iri kuona hutachiona hutsva hwakapetwa zvakapetwa kaviri pane hwezuva rakanyorwa zvakanyanya kubva denda iri.
Nekuwedzera kwakadai mumakesi matsva, mumwe angafunga kuti inguva yekudzoreredza mafambiro ekufamba, asi kusvika parizvino hurumende haina kuchinja chinhu.
Kubvisa izvo izvo zvino zvakavhenekwa muhurumende (60 muzana), 243 hutachiona hunoburitsa kunze kureva hutachiona hunosvika mazana manomwe zvichienderana nenhamba dzegore rapfuura majekiseni asati aitika.
Zuva rakaipisisa kubva pakatanga denda iri yaive Nyamavhuvhu 27, 2020, iine 371 mazuva ese matsva matsva. Asi zvichibva pakuongorora avo vakabayiwa majekiseni, nhasi kwave kuwedzera kwakanyanya kwakambonyorwa mukutapukirwa kutsva, uye vatungamiri vekushanya vakanyarara.
Mahotera, maresitorendi, nezvitoro zvakazara. Iko hakuna nzvimbo yemahombekombe akakurumbira, seWaikiki Beach, kuti uwane nzvimbo yetowel yako.
Iko hakuna vanosvika kune dzimwe nyika, asi vanosvika mudzimba vakasanganiswa vanyoresa vakawanda vasvika kare kudarika denda risati rasvika.
Iyo coronavirus hutachiona huwandu muHawaii hwasvika katatu manhamba kwemazuva ekupedzisira masere uye vari kukwira zuva rega rega.
Zviitiko zvitsva gumi nematanhatu zvakanyoreswa muHonolulu County, makumi mashanu muHawaii County, gumi nemana muMaui County, uye zvisere muKauai County.
Inenge mazana makumi manomwe neshanu muzana ezviitiko muna Chikunguru zvinobva munharaunda zvinopararira, makumi maviri kubva muzana kubva kuvagari vanodzoka kubva pakufamba, uye 78 muzana kubva kune asiri mugari mafambiro.
Rekodhi vashanyi vanosvika vanogona kungova nechikonzero che2 muzana chete, iri nhau dzakanaka dzehupfumi, asi nekuwedzera kwakadai, inogona kunge iri nguva yekudzosera kumashure zvirevo.
Nguva yekupedzisira Hawaii yaive pasi pekuvharirwa kwakazara pamwe nenhamba yemakesi matsva ari kuonekwa. Nhasi, hapana kana shoko riri kutaurwa nevakuru vehurumende.
Kubva munaChikunguru 8, 2021, vachengeti vakazara-vachena havachafanirwe kunetseka nezvekupa yakaipa PCR bvunzo kuti vadzivirirwe kwemazuva gumi, uye nevanopfuura 10 vanosvika pazuva, shanduko iyi pakurambidzwa kwekufamba inoratidza.
Kune vamwe vashanyi muHawaii izvozvi zvichienzaniswa ne2019. Kana iwe ukatora kufamba-famba kana kutyaira uchidzika pasi paKallauaua Avenue muWaikiki, ingangoita zvikamu zvishanu muzana zvevanhu vakapfeka mamask. Asi, nenhamba dzakakwira dzenyaya nyowani, hapana kana peep kubva kuna Gavhuna yekuraira mask kupfeka zvakare.
Hawaii iri kutevera maitiro muUnited States ekuti vanhu vanodyiswa uye nepfungwa immune. Ivo havasisina hanya nekuzvivhara, inova ndiyo chete nzira yekudzivirira kupokana neCOVID-19 parutivi pekubaiwa jekiseni zvizere. Iyi ipfungwa dzinokuvadza uye budiriro ine njodzi.